Naqshadaynta iyo soosaaristu waxay ahaayeen sababaha qaraxyada Galaxy Note 7 | Wararka IPhone
Naqshadaynta iyo soo saaristu waxay ahaayeen sababaha qaraxyada Galaxy Note 7
Xagaagii la soo dhaafay oo dhan, qaar badan ayaa ahaa dadka isticmaala ee ku raaxeysanayay, gaar ahaan kuwa isticmaala ee aan u arkin Samsung sifiican, saabuunta opera ee Samsung Galaxy Note 7 iyo baytariyada, dhibaato ku qasabtay shirkadda Kuuriya inay la baxdo aaladda, ka dib markii la bilaabay barnaamij beddelaad ah oo la helayo natiijooyin la mid ah aaladihii markii hore suuqa ku dhacay. Dhibaatadu waxay la xiriirtay baytariga, laakiin ilaa maanta shirkadda Kuuriya ma bixin xog dheeri ah, maxay ahaayeen sababaha dhabta ah ee qaraxyada aaladahaan soo gaareen ee ku qasbay ka bixitaankooda suuqa si looga fogaado xumaanta ka sii weyn.
Galaxy Note 7 ayaa markii ugu horaysay suuqa ku garaacay batari ay samaysay shirkad hoosaad Samsung SDI, oo ah batarigii lagu badalay ATL-kii markii ay shirkadu bilawday barnaamijka badalka. Xaaladda batteriga asalka ah ee aaladda, oo ay soo saartay shirkadda Samsung SDI, dhibaatada waxaa laga helay nashqadda batteriga, Kaas oo ay aad ugu yaraayeen qaybaha gudaha ku jiray, taas oo sababtay in qeybaha ay isku rogmadaan gudaha, isku darka qeybaha batteriga, iyagoo soo saara qaraxyo.
Markii Samsung ay billowday barnaamijka beddelka, baytariga markan waxaa soo saaray ATL, maadaama dhibaatada markii hore si toos ah loogu nisbeeyay hannaanka waxsoosaarka SDI ee Samsung, kaas oo sabab u ahaa bixitaankii sarkaalkeedii fulinta ee shirkadda. Batarigan beddelka ah ma lahan dhibaato la mid ah tii hore, maaddaama barta dabka ee dabka koontoroolladani ay ku taal dhinaca bidix, halka batariyadii asalka ahaana ay midigta ku jirtay.
Ciladda laga helay baytariyadan waxay la xiriirtay habka wax soo saarka laftiisa, ee ma ahayn tayo. Baytariyadaan waxay lahaayeen cilado ku jira alxanka oo sababay in naxaasta ku jirta gudaha ay dhalaasho taasoo keentay wareegga gaaban iyo qaraxii xigay ee xarunta. Intii lagu guda jiray shirkii ay ku soo bandhigtay natiijooyinka baaritaanka, shirkaddu waxay ku dhawaaqday tijaabada cusub ee mid kasta iyo batteri kasta oo ay soo saarto Samsung SDI ay la kulmi doonaan iskuday ay kaga hortagayaan dhibaatooyinka noocan ah inay mar kale dhacaan mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Naqshadaynta iyo soo saaristu waxay ahaayeen sababaha qaraxyada Galaxy Note 7
"Viva Amiga", sheekada kumbuyuutarka ee Steve Jobs ka baqay
Hugo Barra wuxuu doonayaa inuu ku laabto Silicon Valley wuxuuna ka tagay Xiaomi